राजनीति पेशा हुन थाल्यो । कसरी ? राजनीति गर्ने व्यक्तिले पेशामा ‘राजनीति’ लेखेको धेरैठाउँ देखेको छु । ‘के गर्नुहुन्छ ?’ जवाफ आउँछ, ‘राजनीति गर्छु ।’ कसका लागि ?’ जवाफ आउँछ, ‘जनताका लागि ।’ कसको पक्षमा ? जवाफ आउँछ, ‘जनताको पक्षमा अनि जनताको सेवामा ।’ शब्द र व्यवहारमा कति धेरै फरक क्या ! शब्दमा सेवा, व्यवहारमा पेशा । कठै राजनीति !
के नेताहरु जनताको पक्षमा राजनीति गर्छन् ? धेरैको जवाफ आउँछ, ‘गर्दैनन् ।’ अधिकांशले दाबा गरेर जवाफ दिन्छन्, ‘नेताले आफ्ना लागि, आफन्तका लागि अनि गुटका लागि राजनीति गर्छन् ।’ उदाहरण हजारौं भेटिन्छन् यो प्रशङ्गमा । आखिर यो अवस्था आयो कसरी ? किन राजनीति विकृत बन्यो ? किन राजनीतिमा स्वार्थ मिसियो ? किन राजनीति समाजको कब्जाभन्दा बाहिर गयो ? किन जनताको राजनीति गरिएन ? सच्चा जनता को हुन् ? के कार्यकर्ता मात्र जनता हुन् ? के जनताको लागि राजनीति भएको छ त ?
जनता को हुन् भन्ने विषय ठूलो बहसको विषय हुनसक्छ । सबै नेता । सबै कार्यकर्ता । अनि, सबैमा राजनीतिको ट्याग । राजनीति गर्ने सबैले जनताको राजनीति गर्ने भन्छन् । हन, जनता चैं को हुन् ? कसका लागि केन्द्रित हुँदैछ राजनीति ?
पहुँच पुग्यो, सबै पायो । जसले पहुँच पुर्याएन, केही पाएन । चाकडी नगर्ने, पहुँच नपुर्याउने र शक्तिकेन्द्र नधाउने जनता ‘जनता’ होइनन् ? तल्लो वर्गको किसान जनता होइन ? श्रमिक जनता होइन ? मजदुर जनता होइन ? सुकुम्बासी जनता होइन ? आदिवासी, दलित, जनजाती जनता होइनन् ?
अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, ‘शक्तिमा पुगेपछि अधिकांश व्यक्ति बिग्रिन्छन् ।’ उनको शब्दको आसय, राजनीतिमा असत्य, भ्रम, झुट, आतंक र अस्थिरता बिक्न थाल्यो । सत्य, न्याय, शान्ति, सहिष्णुता, विकास र परिवर्तन गौण बन्यो । ग्रीकका प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोले भनेका छन्, ‘मूर्खहरुबाट सज्जनहरु शासित हुने विधि नै राजनीति हो ।’ यो किन हुन्छ ? मूर्खहरुबाट सज्जन शासित हुनु नै राजनीति हो त ? के सबै राजनीतिज्ञ मूर्ख नै छन् त ? कि अब्राहमले भनेजस्तो शक्तिमा पुगेपछि व्यक्ति मूर्ख नै हुने हो ?
थोरै व्यक्ति मात्र असल नेता बने । यो संसारकै समस्या हो । मार्टिन लुथर किङले भनेका छन्, ‘राजनीति सधैं जनताको लागि गर्नुपर्छ ।’ उनले सच्चाईमा जनताको राजनीति गरे । त्यसपछि कति लुथर किङ जन्मिए मलाई थाहा छैन । नेपालमै सन्दर्भमा चर्चा गर्ने हो भने वीपीले एकप्रकारको जनताको राजनीति गरे क्यार ! आजसम्म धेरैले उनलाई मान्छन् । मदन भण्डारीले पनि जनताको राजनीति गरे । प्रचण्डले पनि जनताको राजनीति गरे । रुपान्तरणको पक्षमा लडे । अरुका राजनीति खोक्रो राजनीति लाग्छ । सिद्धान्त नभएको । योजना नभएको । परिवर्तनको परिकल्पना नभएको । केवल जागिर खानका लागि राजनीति । केवल परिवार पाल्नका लागि राजनीति ।
म आफैंलाई समय समयमा प्रश्न गर्छु । आखिर जनताको राजनीति भनेको के हो ? के जनताले घरघरमा चामल ल्याइदेऊ भन्छन् ? के जनताले लत्ताकपडा किनिदिनु भन्छन् ? के जनताले रेष्टुरेन्टमा घुमाउन लैजाउ भन्छन् ? जनताले खोजेको अनि जनताले चाहेको राजनीति चैं के हो त ? जनताले खोजेको विकास र रुपान्तरण के हो त ? सच्चा जनताले खोजेको विकास सामाजिक विकास हो । सच्चा जनताले खोजेको रुपान्तरण सामाजिक रुपान्तरण हो । सच्चा जनताले खोजेको परिवर्तन समग्र समाजको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक परिवर्तन हो । नेता र कार्यकताले खोजेजस्तो व्यक्तिको परिवर्तन होइन । व्यक्तिको रुपान्तरण होइन । व्यक्तिको मात्र विकास होइन ।
राज्यले चलाएका विद्यालयहरु उत्कृष्ट र अब्बल हुनुपर्छ । जनताले खोजेको विकास त्यही हो । सीप, संस्कारसहितको गुणस्तरीय शिक्षा जनताले पाउनुपर्छ । राज्यले चलाएको स्वास्थ्य संस्थाहरु उत्कृष्ट र सेवामुखी हुनुपर्छ । जनतादेखि नेतासम्मले स्वदेशकै सरकारी अस्पतालहरुमा समान र गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्छ । जनताले खोजेको परिवर्तन त्यही हो । किसानले समय अनुकुलको कृषि कर्म गर्न पाउने वातावरण र सेवा हुनुपर्छ । जनताले खोजेको रुपान्तरण त्यही हो । हरेक व्यक्तिमा सीप हुनुपर्छ । हरेक व्यक्तिमा संस्कार हुनुपर्छ । हरेक व्यक्तिमा अनुशासन र धर्म हुनुपर्छ । राजनीतिबाट जनताले खोजेको अपेक्षा त्यही हो । नेताले समाज बनाउने हो । नेताले संस्कार बसाउने हो । नेताले सपना देखाउने हो । अनि, कार्यान्वयन गराउने हो ।
जनताले खोजेको परिवर्तन पहुँचका आधारमा नभएर क्षमता र आवश्यकताको आधारमा पाउनुपर्छ । जनताले खोजेको समृद्धि समाजमा सुशासन हुनुपर्छ । कानूनको उचित पालन र संरक्षण गर्नु गराउनुपर्छ । हरेक व्यक्ति उद्यमशील हुनुपर्छ । उत्पादनमा लाग्नुपर्छ । त्यो हो नि रुपान्तरण त । तर, हाम्रा जागिरे नेताले यी विषयलाई बुझेका छन् ? बुझेकाले परिवर्तनको पक्षमा काम गरेका छन् ? काम गर्नेहरुबाट यस अनुरुपको नतिजा आएको छ ? ‘छ’ भनेर दाबा गर्ने हिम्मत ममा आएको छैन । तपाईंहरुमा आएको छ भने ठीकै छ, छैन भने अब रुपान्तरण खोजौं । जनताको राजनीति गर्नेलाई पदमा पु¥याऔं ।
हेर्नुस् न, दिल्लीमा केजरीवाल सरकारले सडक सडकमा झाडु लगाएर सुरु गरेको राजनीति आज समाज रुपान्तरणसम्म पुग्यो । उनीहरुले जनताकै काम गरे । विपन्नको हितमा काम गरे । किसानको पक्षमा काम गरे । महिलाको पक्षमा काम गरे । दलितको पक्षमा काम गरे । अल्पसंख्यकको पक्षमा काम गरे । हामीसँग त एजेण्डा नै छैन । काम कसरी होस् ? समाज सुधारको सपना नै छैन । रुपान्तरण कसरी होस् । परिवर्तन के हो ज्ञान नै छैन । अनि परिवर्तन कसरी होस् ? अन्त्यमा, राजनीतिज्ञलाई एउटा प्रश्न । ‘कहिलेसम्म राजनीतिलाई पेसा बनाउने ?’ अनि जनतालाई एउटा प्रश्न, ‘राजनीतिलाई पेशा बनाएर मूर्ख शैलीको शासन गर्नेहरुलाई कहिलेसम्म विश्वास गर्ने र पछि लाग्ने ?’
म कहिलेकाहीँ आफैंलाई प्रश्न गर्छु मैले निजामती सेवा छोडेर शिक्षण पेशामा नआएको भए के हुन्थ्यो? सायद इमानदार बनेर भोकभोकै पर्थें या अकुत भ्रष्टाचार गरेर जेल पर्थेँ अनि त्यही पैसा घुस दिएर न्यायालयबाट सफाइ पाउँथेँ या त राज्य दोहन गरेको पैसाले रोयल जिन्दगी बिताउँथेँ।
अप्राकृतिक जीवनशैलीको स्रोत नाजायज नै हुन्छ। जबसम्म राजनीतिले कुनै निश्चित आम्दानी हुने पेशा या व्यवसाय गर्दैन तबसम्म उसले भ्रष्टाचार सिवाय अरु केही गर्दैगर्दैन। यो लेखको अभिप्रायले मन छोयो। मैले पनि धेरै नवोदित तथा स्थापित राजनीतिज्ञहरूको सँगत बर्षौँदेखि गर्दै आएको छु जसको कुनै व्यवसाय वा नियमित आम्दानीको स्रोत नै छैन तर जीवनशैली चाहिँ विदेशी कूटनीतिज्ञको भन्दा कम छैन। प्रश्न यहीँ उब्जिन्छ किन देश गरिब छ किनकि राज्यको लेखाप्रणालीभित्र कहिलै नसमेटिने अकुत आम्दानी (कालो धन) को कारोबार यति धेरै छ कि त्यसलाई रोक्न या नियमसंगत बनाउन जो राज्यसत्तामा पुग्छ उहीँ नै त्यो धनराशिको पोखरीमा चुर्लुम्म डुब्न पुग्दछ। यसर्थ एक रुपैयाँ होस् या एक खरब होस् जब खर्चको प्रक्रियामा जान्छ त्यसको जायज स्रोत प्रमाणिात हुनुपर्छ। यो कार्यको थालनी राजनीतिज्ञ, व्यापारी र कर्मचारीहरूबाट हुने हो भने तलको तप्का पनि छोटो समयमै शुद्धीकरण हुन पुग्छ। हाम्रो न्यायालयको टाउको यति धेरै झुकेको छ कि यसले माथि हुनेगरेको डकैती कहिले देख्दैन अनि तलको सानोतिनो चोरीलाई कडा दण्ड दिएर न्याय सम्पादनको ढोल पिट्ने गर्दछ। यस्ता लेखहरू नियमित मिडियाका हेडलाइन बनून् र समाज शुद्धीकरणको बाटोमा अघि बढोस् ! लेखकलाई धेरै धेरै धन्यवाद !!
manod sharma says:
कुनै पनि ब्यक्तिले राजनिती आफ्ना लागि,आफन्तका लागि या त गुट्का लागि गर्छ। जनताको नाम मात्र बेच्ने काम गर्छन् तसर्थ कर्मचारीले बिल्कुल पार्टी सदस्य लिनु गलत हो।